Ecology - magazine "Potato System"
Ny mpahay siansa avy any Angletera dia namolavola fomba vaovao miaro ny tontolo iainana hiadiana amin'ny aretin'ny zavamaniry
Ny mpahay siansa any Singapore dia mamorona fonosana legioma azo simba izay mamono bakteria
Tena LOHATENY Digest siansa tontolo iainana
Nahita fomba tsotra sy azo antoka hamonoana moka mamindra tazomoka ny manam-pahaizana avy ao amin’ny Oniversiten’i Stockholm. Tamin'ny volana Desambra, ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia nitatitra ...
3 fepetra fototra eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana maharitra ny fambolena ovy.
Fampiharana ny fomba fambolena regenerative amin'ny saha ovy rehetra McCain amin'ny 2030 ny orinasa McCain manao, miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka - ...
Miasa any Etazonia ny karazana ovy mahatanty toetrandro
Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Maine (Etazonia) dia nanokana folo taona mahery nikaroka fomba hanatsarana ny kalitaon'ny voly ovy. Tamin'ny taon-dasa, ny tanjona fototra...
Ny tifitra RNA dia mety kokoa amin'ny tontolo iainana noho ny fanafody simika
Maherin'ny 100 lavitrisa dolara ny fatiantoka vokatry ny fambolena isan-taona. Ny pesticides nentim-paharazana dia miasa, saingy mety ho ...
Novolavolaina ny fomba biolojika hiadiana amin'ny kankana amin'ny fampiasana holatra mpiremby
Nanapa-kevitra ny hitsapa fomba vaovao hiadiana amin'ny wireworm manimba ny voly ovy ny mpahay siansa avy ao amin'ny Oniversiten'i Freiburg (Switzerland). Ny olitra voangory Clicker dia mihinana lavaka ao amin'ny ...
Ehsan Soltan, tompon'ny fifandraisan-davitra an'ny Soltan, dia nahita fomba hampiharana ny traikefany sy ny fahaizany amin'ny famahana ny olan'izao tontolo izao ...
Ny Holandy dia mamokatra solika avy amin'ny fako ovy
Ny mpahay siansa ao amin'ny Oniversiten'i Wageningen sy ny Foibem-pikarohana (Holandy) dia namolavola karazana solika vaovao amin'ny fiaramanidina vokarina amin'ny fako ovy. Ny mety hisian'ny famoronana fiaramanidina mampanantena ...
Ronono ovy ho avy tsy ho ela eny amin'ny talantalana UK
Efa tamin'ny Febroary 2022, ny rojom-pivarotana Waitrose dia hanomboka handefa ny marika Soedoà ronono ovy Dug mankany UK. Ny britanika dia nihinana nahandro, nendasina, ...
Hanomboka hiasa any Rosia manomboka amin'ny 2022 ny rafi-pitantanana ny famoahana entona mandatsa-dranomaso
Ny praiminisitra Mikhail Mishustin dia nanao sonia didim-panjakana momba ny kaontim-panjakana momba ny entona mandatsa-dranomaso. Hanomboka amin’ny taona ho avy izy io. Ity...
Handefa menaka nendasina i Finn mba hamokarana solika azo antoka
Ny haingam-pandeha haingam-pandeha Hesburger dia nanao sonia fifanarahana tamin'ny orinasa mpamokatra solika maintso Finnish Neste. Hesburger dia hanomboka handefa culinary efa niasa ...
P. 1 amin'ny 6 1 2 ... 6 Next.
Hahomby amin'ny famokarana legioma any Russia ny biolojika
Ny ivom-pambolena rosiana-sinoa voalohany dia nisokatra tao Khabarovsk